अमरराज पुन - रुकुम, १७ बैशाख ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ की २७ बर्षिया कमला चन्दले चारवर्षपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालसंग भेट गरेकी छन् । भेटमा कमलाले आफ्नो परिवार र बालबच्चाको अवस्था बारेमा नेता नेपाललाई जानकारी गराउने मौका पाईन् । कमलाले एक छोरा र छोरी संगै नेता नेपालसंग भेट गरेकी हुन् । भेटको क्रममा नेता नेपालले कमलाको पारिवारिक अवस्था, बालबच्चा र उनको परिवारमा के भईरहेको छ भन्ने विषयमा रुचीपूर्वक सोधका थिए । कमला संगको भेटमा पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले उनका चार बर्षका छोरा सकिन चन्द र ११ बर्षिया छोरी निरुता चन्दलाई कतिमा पढिरहेका छौ ? ल राम्रोसँग पढ्नु है भनेर आग्रह गरेका थिए ।
भेटमा कमलाको परिवारले नेता नेपालसंग सामुहिक तस्बिर समेत लिए । कमलाका श्रीमान दिनेश चन्द हाल विदेशमा रहेको र उनको कमाई के कस्तो छ ? भन्दै नेपालले कमलालाई सोधेका थिए । कमलाले खै कस्तो छ ? बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेकी छु, भन्दै जवाफ दिएकी थिईन् । कमलाको त्यो जवाफ सुनेपछि नेता नेपालले विदेशमा रहेका कमलाको श्रीमानले काम गर्ने देश र कम्पनीको बारेमा बुझेर मलाई फोन गर्नु, म उहाँलाई फोन गरेर स्वास्थ्य उपचारका लागि सकेको सहयोग गर्छु भनेका थिए । त्यसलगत्तै कमलाको परिवार बाट एमाले नेता माधव नेपाल छुट्टिएका थिए ।
प्रसंग हो, सोमबार प्रेस चौतारी नेपाल, रुकुम र प्रेस सेन्टर नेपाल, रुकुमले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको समापन पछि नेता नेपाल र कमलाबीच भएको तेस्रो भेटको एउटा क्षण । २०६६ भदौ २४ गते सुत्केरी व्यथा लागेर रुकुम जिल्ला अस्पतालमा कमला चन्द सल्लेमा भर्ना भएकी थिइन् । तर उनलाई जिल्लामा उपचार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कामको शिलसिलामा सदुरपश्चिम गएका माधवकुमार नेपाल नेपालगंज बिमानस्थलमा आएको बेला रुकुमबाट एमाले नेता खेममान खड्काले चन्दको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यसलगत्तै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर माधव नेपाल रुकुम आएका थिए । त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री नेपालले रुकुमकी कमला चन्दलाई तत्काल आफुसँगै हेलिकप्टरमा चढाएर काठमान्डौं लिएका थिए । काठमाडौं लगिएपछि कमलाको ज्यान बाँच्न सफल भएको थियो । तर उनको बच्चा भने बाँच्न सकेको थिएन ।
कमलाले चार बर्ष अघि काठमान्डौंमै पुगेर नेता नेपाललाई भेटेकी थिइन् । यो पटक फेरी नेता नेपाल संग भेट्न पाउँदा उनी र उनका बालबच्चा समेत खुशी भएका छन् । कमलाले नेता नेपाललाई घरको बुवा सरह मान्ने गरेको बताईन् । सोमबारको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले कमलाका एक छोरी र एक छोरालाई पढाउने समेत जिम्मा लिएका छन् । नेपालले कमला र कमलाको परिवार संग नियमित सम्पर्कमा रहने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।